နေပြည်တော်ကောင်စီနှင့် ဌာနဆိုင်ရာမိသားစုများ၏အဋ္ဌမအကြိမ်ကထိန် သင်္ကန်းဆက်ကပ် လှူဒါန်းပွဲအခမ်းအနားကို (၁၆-၁၁-၂၀၁၈)ရက် (၁၀၀၀)အချိန်တွင် နေပြည်တော်ကောင်စီရုံး၊ ဇမ္ဗူသီရိခန်းမ၌ကျင်းပ
နေပြည်တော်ကောင်စီနှင့် ဌာနဆိုင်ရာမိသားစုများ၏အဋ္ဌမအကြိမ်ကထိန် သင်္ကန်းဆက်ကပ် လှူဒါန်းပွဲအခမ်းအနားကို (၁၆-၁၁-၂၀၁၈)ရက် (၁၀၀၀)အချိန်တွင် နေပြည်တော်ကောင်စီရုံး၊ ဇမ္ဗူသီရိခန်းမ၌ကျင်းပ	[. . .]
(၇-၁၁-၂၀၁၈)ရက် (၀၆၀၀)အချိန် နေပြည်တော်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ နှစ်ပတ်လည်နေ့ ကျင်းပပြုလုပ်
(၇-၁၁-၂၀၁၈)ရက် (၀၆၀၀)အချိန် နေပြည်တော်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ နှစ်ပတ်လည်နေ့ကျင်းပပြုလုပ် [. . .]
(၂-၁၁-၂၀၁၈)ရက်(၁၀၀၀)အချိန် နေပြည်တော်ကောင်စီရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ(၁)၌ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ထိန်းသိမ်းလျက်ရှိသောမြေများပေါ်တွင် တရားမဝင်ဆောက်လုပ်ထားသည့် ကျူးကျော်အဆောက်အဦများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ
(၂-၁၁-၂၀၁၈)ရက်(၁၀၀၀)အချိန် နေပြည်တော်ကောင်စီရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ(၁)၌ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ထိန်းသိမ်းလျက်ရှိသောမြေများပေါ်တွင် တရားမဝင်ဆောက်လုပ်ထားသည့် ကျူးကျော်အဆောက်အဦများနှင့် စပ� [. . .]
(၃၀-၁၀-၂၀၁၈)ရက်(၀၈၁၀)အချိန် တပ်ကုန်းမြို့နယ်၊ ဗိုလ်မင်းရောင်ရပ်ကွက်၊ ရန်-မန်းကားလမ်းဘေးအနီးရှိ နေပြည်တော်စည်ပင်ဘဏ်လီမိတက် တပ်ကုန်းဘဏ်ခွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
(၃၀-၁၀-၂၀၁၈)ရက်(၀၈၁၀)အချိန် တပ်ကုန်းမြို့နယ်၊ ဗိုလ်မင်းရောင်ရပ်ကွက်၊ ရန်-မန်းကားလမ်းဘေးအနီးရှိ နေပြည်တော်စည်ပင်ဘဏ်လီမိတက် တပ်ကုန်းဘဏ်ခွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ	[. . .]
(၁၇-၉-၂၀၁၈)ရက် (၀၉၀၀)အချိန် တပ်ကုန်းမြို့နယ်၊ အမှတ်(၆၈)စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနတွင် လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ မောင်းနှင်ထိန်းသိမ်းမှု(အခြေခံ)တောင်သူသင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ နေပြည်တော်ကောင်စီဝင် ဦးအေးမောင်စိန်တက်ရောက်
(၁၇-၉-၂၀၁၈)ရက် (၀၉၀၀)အချိန် တပ်ကုန်းမြို့နယ်၊ အမှတ်(၆၈)စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနတွင် လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ မောင်းနှင်ထိန်းသိမ်းမှု(အခြေခံ)တောင်သူသင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ နေပြည်တော်ကောင်စီဝင် ဦးအေးမောင်စ� [. . .]
« တစ်ပတ်အတွင်း နောက်ဆုံးရသတင်းများ
အမေရိကန် တစ်ဒေါ်လာ ၁၅၇၃.၀၀
ဥရောပ တစ်ယူရို ၁၇၉၄.၇
တရုတ်	 တစ်ယွမ် ၂၂၆.၆၇
ထိုင်း တစ်ဘတ် ၄၇.၈၄၁
မလေးရှား တစ်ရင်းဂစ် ၃၇၅.၆၄
အိန္ဒိယ	 တစ်ရူပီ ၂၁.၈၅၃
ဂျပန် တစ်ရာယန်း ၁၃၉၅.၈
တောင်ကိုရီးယား တစ်ရာ၀မ် ၁၃၉.၆၇
သြစတြေးလျ	 တစ်ဒေါ်လာ ၁၁၅၂.၀၀
စင်ကာပူ တစ်ဒေါ်လာ ၁၁၄၅.၅